देउवाको संदेश बोकि विमलेन्द्र बिहानै बालुवाटार छिरेपछि बालानन्दको मन दुख्यो – YesKathmandu.com
मङ्गलबार १२, पुष २०७३
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको संदेश बोकि बुधबार विहानै गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार छिरे । देउवाको सन्देश प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुनाए लगतै स्थानीय तह पुर्नःसरचना आयोगका सदस्यहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम रद्द भयो ।
सरकारले प्रतिवेदन बुझन नमानेको असन्तुष्टी आयोगले पोखेलगतै प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगका सदस्यहरुलाई बुधबार विहान १० बजे बालुवाटारमा निम्तो पठाए । प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि आयोगले आफ्नो १५ सय पेज लामो प्रतिवेदन तयार पारी बालुवाटारतिर हिड्न लागेका बेला प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा सुचना आयो ‘राजनीतिक भेटघाटका कारण आयोगका सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्रीज्युले भेट्न नसक्ने’ जानकारी आयो ।
प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक ब्यस्तताको कारण देखाएपनि सत्य त्यो होइन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आयोगका सदस्यलाई नभेट्न र प्रतिवेदन पनि नबुझन प्रधानमन्त्रीलाई संदेश पठाएपछि भेटघाट कार्यक्रम रद्द भएको हो । देउवाको संदेश सुनाउँदै निधिले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल आयोगको प्रतिवेदन बुझाए स्थानीय निकाय स्वतः खारेज हुने कानुनी ब्यवस्था भएको र प्रतिवेदन बुझे पछि सच्याउन नसकिने बताएका थिए । आयोगको प्रतिवेदन विवादित भएको बताउँदै राजनीतिक सहमति गरेर वा सत्तापक्षिय दलहरुको सहमतिमा मात्र बुझनु पर्ने राय निधिले दिएका थिए ।
देउवाको संदेश र निधिको रायपछि प्रधानमन्त्रीले आफैले दिएको समयमा आयोगका सदस्यहरुलाई भेटन अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ । आफैले दिएको समयमा पनि भेटन अस्वीकार गरेपछि आयोगका सदस्यहरु रुष्ट बनेका छन् ।
पूर्व सांसद सायमीको निधनले आजको संसद बैंठक स्थगित
कहाँबाट कहाँ पुगे माओवादी ?
कांग्रेस महाधिवेशन आउँदो असोजभित्रै
प्रधानमन्त्री ओलीले आज मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दै, को को मन्त्री बन्दैछन् ?
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको घरमा भएको बिष्फोट रहस्यमै , यादबले भने,‘सरकारले सुरक्षा दिन सकेन